Mexico waxay diyaarisay imaatinka Apple Pay | Waxaan ka socdaa mac
Shaki la'aan, haysashada adeeggan Apple ayaa ah kan ugu fiican ee lagu bixin karo lacag-bixinnadayada. Inbadan oo naga mid ah maanta ma aysan qaban karin Apple Pay la’aanteed waana tan fududaan, fudayd iyo nabadgelyo bixinta adeeggan Apple waxay ka badan tahay inta la caddeeyey inta lagu jiro waqtiga in adeegga la heli karo.
Ma aha hal cabasho oo ku saabsan dhibaatooyinka amniga ee kaararka iyo xitaa marka lacag bixinta, markaa adeegsade kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu isticmaalo ama aanu adeeggan Apple ee lacag bixintu bixininTani way iska cadahay, laakiin hadaad haysato, waxaad hubaal ahaan u isticmaali doontaa.
Dhibaatadu waxay timaaddaa marka aadan haysan lagana heli karo waddankaaga taasna waa sida saxda ah waxa ka dhacaya Mexico, taas oo illaa maanta aan haysan ikhtiyaarka ah isticmaalka Apple Pay. Tani way isbadali kartaa saacadaha soo socda waana taas waxaa jira calaamado muujinaya Apple Pay oo ku qoran bogga rasmiga ah ee shirkadda Cupertino. Marka la soo koobo, waxay umuuqataa in tani ay aad isugu dhowdahay dadka isticmaala Apple ee ku sugan wadanka waxay rabaan inay awoodaan inay isticmaalaan Apple Pay-kan.
Hay'adaha ugu horreeya ee la heli karo ee adeeggan lacag bixinta ee Apple waxay noqon doonaan: Banregio, CitiBanamex, Hey Banco iyo Inbursa si macaamiisha ay ugu gali karaan kaarkooda Mac, iPhone ama Apple Watch oo ay awood ugu yeelan karaan inay wax ku iibsadaan iyagoo ku bixinaya Apple Pay. Dareenkan, waxay kuxirantahay wax badan oo ku saabsan fidinta aaladaha aan xiriirka lahayn ee sida weyn ugu adeegsanaya Apple Pay dukaamada iyo adeegyada kale. Isbaanishka, tusaale ahaan, waxaad kubixin kartaa kudhowaad meelkasta qaabkan lacag bixinta ee aan lala xiriirin, tani waxay kadhacaysaa inbadan oo aduunka oo dhan ah, marka Mexico waxaan u maleynaynaa inay lamid noqon doonto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Mexico waxay diyaarisay imaatinka Apple Pay